Solony: tranokala tsara indrindra hampitahana rindrambaiko malalaka sy misokatra | Avy amin'ny Linux
Solony: Ny toerana tsara indrindra hahalala sy hampitahanao ny lozisialy maimaim-poana
Rehefa misy izany tranonkala mamaky sy mahalala ny vaovao azo antoka Rindrambaiko (Rafitra miasa, fampiharana ary sehatra) tsy misy tsara noho Blogs, ary rehefa miresaka Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary GNU / LinuxEny, na dia bebe kokoa aza.
Bilaogy toa antsika, Avy amin'ny Linux, ankoatry ny maro hafa, dia tsara loharanom-pahalalana mijanona ho vaovao hatrany amin'ireo faritra ireo. Saingy, rehefa ankoatry ny fanavaozana ny daty dia te hitrandraka amin'ny fotoana iray isika safidy tsara misy amin'ireo programa vakintsika, satria misy tranokala manamora ireo asa ireo. Noho izany, anio dia hizaha ny sasany isika hahitantsika hoe iza amin'ireo no mifanaraka tsara indrindra amin'ny filan'ny tsirairay.
Efa taloha, efa niresaka momba an'io hevitra io tamin'ny fomba tampoka isika rehefa niresaka Openhub, izy izay, na dia tsy fampitahana marina aza Fampiharana rindrambaiko maimaim-poana fa Tetikasa loharano misokatra, dia manompo an'ity asa ity amin'ny alàlan'ny fitaovana fampitahana namboarina kely antsoina hoe: Ampitahao ireo tetikasa.
Tsara ny mahatadidy sy manasongadina ireo liana amin'izany Openhub, izay araka ny anao tranokala ofisialy:
"NAVondron'olona an-tserasera sy lahatahiry ho an'ny daholobe momba ny lozisialy Free and Open Source (FOSS), izay manome serivisy fandinihana sy fikarohana hikarohana, hanombatombana, hanaraka ary hampitahana kaody sy tetikasa open source. Rehefa misy dia manome koa fampahalalana momba ny marefo sy fahazoan-dàlana amin'ny tetikasa".
Raha mila fanazavana fanampiny momba Openhub, amin'ny faran'ity famakiana ity dia azonao atao ny manindry ny manaraka Lahatsoratra mifandraika teo aloha:
1 Tranonkala hikarohana safidy hafa maimaimpoana sy malalaka
1.1 Mitadiava fomba hafa amin'ny Espaniola
1.1.1 CD maimaim-poana
1.2 Mitadiava fomba hafa amin'ny teny anglisy
Tranonkala hikarohana safidy hafa maimaimpoana sy malalaka
Mitadiava fomba hafa amin'ny Espaniola
Na dia amin'ny Espaniôla aza dia vitsy ny tranokala amin'ity karazana ity, ny 3 tena ilaina sy fantatry ny olona azontsika dia:
Tranonkala malaza misy programa maimaimpoana sy misokatra ary maimaim-poana. Avy amin'ny Espaniôla izy io ary hanamorana ny asan'ny fampitahana na hikarohana fampiharana hafa na mitovy aminy, dia mizara azy ireo ho sokajy ao anatin'ny lehibe sy mitombo Catalog Software maimaim-poana.
Rehefa miditra a sokajy, ohatra, sary ary avy eo ao Mpanonta sary, mampiseho antsika rehetra rindrambaiko mitovy amin'izany azontsika ampiasaina mba hanatanterahana asa mitovy amin'izany, na dia ao aza ny tsirairay, manolotra rohy fampahalalana isan-karazany hahalalantsika azy ireo lalina.
(Tambajotra mpampivelatra misokatra) Izy io dia tranonkala iray ihany koa izay an-taonany maro izay manolotra serivisy maimaimpoana ho an'ireo mpamorona lozisialy misokatra. Anisan'ireny serivisy ireny no azontsika lazaina: Fanohanana ireo trano fitehirizana samihafa sy lisitra fandefasa-mailaka, ankoatry ny maro hafa, mba hanolorana fitantanana mora sy feno ny tetikasa voasoratra anarana.
Ho fanampin'izay dia misy a Sarintany rindrambaiko izay manatanteraka tanjona sy toetra mitovy amin'ny Catalog Software maimaim-poana voalaza ao amin'ny CD maimaim-poana. Ohatra, tsy maintsy manindry ianao Lohahevitra, Multimédia, sary ary editera, hahazoana valiny mitovy amin'ny an'ny CD maimaim-poana.
Izy io dia tranokala ara-barotra tsy dia taloha loatra, ary avy amin'ny Espaniola ihany koa, izay manome serivisy maimaimpoana tena tsara, mifantoka amin'ny fanamorana ny fikarohana, ny fampitahana ary ny safidin'ny rindrambaiko takiana ho an'ireo liana. Ho an'ity dia manana koa izy a Directory Directory mizara sokajy voafaritra tsara.
Na izany aza, tsy toy izany CD maimaim-poana y OSDN, mandeha tsara ny motera fikarohana azy. Ka ny fikarohana sy fampitahana azo atao izany haingana sy mahomby kokoa. Zava-dehibe 2 momba an'ity tranonkala ity ny fanoloran'izy ireo hevitra momba ny mpampiasa (hevitra) sy ny solony Rindrambaiko tsy miankina, mihidy ary mivarotra.
naoty: Amin'ny Espaniôla dia misy tranokala kely iray hafa manolotra kely ihany koa fizarana hafa izay mampiasa ireo tranonkala fampitahana ireo, amin'ny Espaniôla sy Anglisy. Izy io dia azo tsidihina amin'ny fipihana eo ambany rohy.
Mitadiava fomba hafa amin'ny teny anglisy
Amin'ny fiteny anglisy, misy tranonkala maro hafa, ny sasany amin'izy ireo dia efa ho fantatra sy hampiasan'ny maro. Ny antony, tsy hanonona afa-tsy izy ireo izahay mba hahafantaran'izy ireo tsikelikely ary hampiasa azy ireo hahatratrarana ireo safidy tsara indrindra amin'ny rindrambaiko malalaka, misokatra ary maimaimpoana ho an'ny rindrambaiko manana, mihidy ary mivarotra. Ary ireto no:
Solosaina amin'ny lozisialy Linux
Mitadiava safidy rindrambaiko tsara kokoa
Saashub - Alternatives sy lozisialy momba ny lozisialy
naoty: Ny ankamaroan'ny tranonkala amin'ny teny anglisy dia misy ny fikarohana an-tanana isaky ny sokajy ary amin'ny alàlan'ny motera fikarohana manan-tsaina.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ireo tranonkala mahaliana sy azo ampiharina natokana amin'ny fampahafantarana ireo rindrambaiko isan-karazany, indrindra ny karazany «libres y abiertos», izay manampy ny maro amin'ny fanamorana ny fikatsahana safidy azo antoka sy azo antoka ho an'ny rindrambaiko mihidy, mihidy ary mivarotra; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Solony: tranokala tsara indrindra hampitahana rindrambaiko malalaka sy misokatra
Firefox 82 tonga miaraka amin'ny fanatsarana ny horonan-tsary, ny haingam-pandeha ary bebe kokoa